२९९ ग्राहक कालोसूचीमा परे, धमाधम लाइन काटिदै | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार २९९ ग्राहक कालोसूचीमा परे, धमाधम लाइन काटिदै
on: २ पुष २०७५, सोमबार १४:२२ प्रदेश समाचार
पुस २, चितवन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका २ सय ९९ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । केन्द्रमा ८ हजार १ सय ६१ जना ग्राहक रहेका छन् ।
कार्यालयका लेखा प्रमुख विष्णुबहादुर राजथलाका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ग्राहकबाट रू. ९५ लाख २४ हजार ७७ असुल गर्न बाँकी रहेको छ । विगत लामो समयदेखि बिजुली उपभोग गरी महसुल बुझाउन नआएका उनीहरुको तीन पुस्तेसहित कालो सूचीमा नाम प्रकाशन गरिएको हो ।
कालो सूचीमा परेका ग्राहकको लाइन काट्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । कालो सूचीमा रहेका अन्य सात जनाले बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन् । उनीहरुबाट रू. १ लाख ८४ हजार ६ सय ९२ असुली गरिएको छ । सोही क्रममा ३ सय ५० भन्दा बढीको लाइन काटी बक्यौता असुली गरिएको छ ।
वितरण केन्द्रका अनुसार हाल विभिन्न ग्राहकबाट रू. ३८ करोड २९ लाख २४ हजार ६ सय ९४ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । बक्यौता रहनेमा सबैभन्दा बढी ग्राहस्थ्य उत्पादन (घरायसी)को रू. ७ करोड ८३ लाख ३४ हजर ८३, गैर व्यावसायिक संस्थाको रू. २ करोड १९ लाख २५ हजार ६ सय ३२ रहेको छ । सिँचाइको रू. २ करोड ३१ लाख ८९ हजार ३ सय ९९, उद्योगको रू. ९३ लाख ३१ हजार १ सय ४२, व्यावसायिक संघसंस्थाको रू. ४७ लाख १८ हजार ९ सय ८४, घरायसीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि रू. ३७ लाख १० हजार १ सय ३६ र खानेपानी रू. १० लाख ९५ हजार १ सय १४ बक्यौता रहेको छ ।
यस्तै अस्थायी बत्तीबापत रू. ४ लाख २३ हजार ३ सय २९ र मठ मन्दिरको रू. २ लाख २३ हजार ३ सय १८ रहेको छ । राजथलाका अनुसार सबैभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता रहेको छ । सडक बत्तीबापत रू. २३ करोड ४ लाख ८३ हजार ४ सय ४९ भुक्तानी मिलान गर्न बाँकी रहेको छ । रासस